Mankalazà ny fahatongavan'ny Battle for Azeroth Pre-Patch miaraka amin'ny fifaninanana eo amin'ny fiarahamonina! | Fiaraha-monina, Fifaninanana | WoW Guides | WoW Guides
Mankalazà ny fahatongavan'ny Battle for Azeroth Pre-Patch miaraka amin'ny fifaninanana eo amin'ny fiarahamonina!
Adrian Da Cuna | | fiaraha-monina, fifaninanana
Aloha! Ny ady ho an'ny Pre-Patch Azeroth dia ho tonga rahampitso any amin'ny fanjakana amerikana ary amin'ny faha-18 mankany amin'ny fanjakana eropeana. Mpamorona atiny maro no maniry hankalaza miaraka aminareo rehetra ny fahatongavan'ity atiny vaovao ity sy ny fanatonana ny fanitarana vaovao izay ho tonga amin'ny tapaky ny volana aogositra.
Amin'ity lahatsoratra ity dia hampifandraisina mivantana amin'ny fifaninanana tsirairay izay homena ny mpamorona atiny samihafa. Hizara azy io amin'ny fizarana samihafa isika, miankina amin'ny karazana sary.
Ho fanamarihana fanampiny, hazavao fa ny sary Mivarotra dia alefa ao anatin'ny faritry ny Espaniôla ary ny sary nomerika rehetra dia manan-kery ho an'ny kaonty eropeana rehetra
Ny ady ho an'ny Pre-Patch Azeroth dia ho tonga rahampitso any amin'ny fanjakana amerikana ary amin'ny faha-18 mankany amin'ny fanjakana eropeana. Mpamorona atiny maro no maniry hankalaza miaraka aminareo rehetra ny fahatongavan'ity atiny vaovao ity sy ny fanatonana ny fanitarana vaovao izay ho tonga amin'ny tapaky ny volana aogositra.
Fotoana filalaovana ho an'ny World of Warcraft
Amin'ireto fifaninanana folo hanananao ireto dia hisafidy ny hahazo 30 andro amin'ny Lalao Time ianao amin'ny World of Warcraft. Ny mpamorona atiny tsirairay dia handefa iray volana, noho izany amin'ny totaliny dia handrehitra 10 volana amin'ny Game Time izahay.
Mba hidirana amin'ireo raffles ireo dia hazavainay ny fomba fandraisana anjara ho an'ny tsirairay. Saingy tadidinay ny namaky ny sioka tsirairay raha mila fanazavana fanampiny.
Fanomezana: 30 andro amin'ny Lalao amin'ny World of Warcraft.
fandraisana anjara: RT + Araho amin'ny kaonty Twitter ofisialinao.
World of Warcraft varotra
Misaotra an'i Blizzard sy Panini Comics afaka mitondra anao izao fifaninanana ofisialin'ny World of Warcraft Merchandising izao. Raha te hiditra amin'ny tsirairay amin'izy ireo dia mila tsindrio fotsiny ny anaran'ny mpamorona atiny ary hitondra anao mivantana amin'ny fifaninanany (tadidio ny mamaky ao amin'ny bitsika izay takiana mba handraisana anjara).
Fanomezana: kitapom-batsy sy plush murloc, keychain Illidan, ary murloc noobz.
Fanomezana: kitapom-batsy sy volon-koditra murchain, lakile key Illidan, ary ny boky Before the Storm.
Fanomezana: kitapom-batsy sy plushie misy murloc, bokotra key Illidan ary boky Chronicles Volume III.
Fanomezana: plush murloc, keychain Illidan ary ny Legends Book Volume V.
Fanomezana: plush murloc sy keychain Illidan.
Fanomezana: ilay tantara mialoha ny tafiotra (amin'ny teny anglisy), ny lakilen'ny Illidan ary ny boky Legends Volume IV.
Amin'ireto fifaninanana roa ireto dia hanana safidy ianao hisafidy iray amin'ireo biby fiompy 15 izay hita ao amin'ny magazay ofisialin'ny World of Warcraft. Raha te hiditra amin'ireo raffles ireo dia mila tsindrio fotsiny ny anaran'ny mpamorona atiny ary hitondra anao mivantana any amin'ny fifaninanana tsirairay avy ianao (tadidio ny mamaky ao amin'ny bitsika izay takiana mba handraisana anjara).
Fanomezana: Iray amin'ireo biby fiompy azo alaina ao amin'ny fivarotana Blizzard ofisialy.
Tendrombohitra fivarotana ofisialy
Amin'ity fifaninanana ity dia hanana safidy ianao hisafidy iray amin'ireo havoana 12 azo alaina ao amin'ny magazay ofisialin'ny World of Warcraft.
Raha te-hahazo an'ity fanomezana ity dia mila tsindrio fotsiny ny anaran'ny mpamorona atiny ary hitondra anao mivantana any amin'ny fifaninanana tsirairay avy ianao (tadidio ny mamaky ao amin'ny bitsika izay takiana mba handraisana anjara).
Fanomezana: iray amin'ireo havoana hita ao amin'ny magazay Blizzard ofisialy.
21 ny fitambarany handray ny ady ho an'ny Azeroth Pre-Patch.
Mirary soa ny rehetra ary misaotra antsika rehetra teo foana!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: WoW Guides » About us » fifaninanana » Mankalazà ny fahatongavan'ny Battle for Azeroth Pre-Patch miaraka amin'ny fifaninanana eo amin'ny fiarahamonina!
Legendaries ao amin'ny patch BfA mialoha ny fanitarana
Ady ho an'ny Azeroth mialoha ny fanitarana Patch Notes